काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री केही आफ्नै पूर्ववत् निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने केहीले नयाँ क्षेत्र रोज्नुभएको छ । यसअघिका चुनावी परिणाम र हालैको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको ‘सेफ’ र ‘डेन्जर जोन’ भने मिश्रित छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो नियमित निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । देउवासँग वाम गठबन्धनका तर्फबाट (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार खगराज भट्ट तेस्रोपटक चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । भट्ट २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा देउवासँग पराजित हुनुभएको थियो । दोस्रो संविधानसभा २०७० को मतान्तर ११ हजारभन्दा बढी थियो ।
अहिलेसम्मका पाँचवटा संसदीय निर्वाचनमा अविजित देउवा अङ्क गणितमा योपटक ‘डेन्जर जोन’मा देखिनुहुन्छ । भट्टलाई दुई पटकको हारपछि जित हासिल गर्ने अवसर पनि छ । डडेलधुरामा प्रतिनिधिसभामा छ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल काठमाडौँ–२ बाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । नेता नेपालको मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका दीपक कुइँकेल हुनुहुन्छ । दोस्रो संविधानसभा उपनिर्वाचनमा पाँच हजारभन्दा बढी मतले कुइँकेल यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । संविधानसभा सदस्यमा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित नेता नेपालले उक्त क्षेत्र छाड्नुभएको थियो ।
पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा दुई क्षेत्रबाट अनपेक्षित हार बेहोर्नुभएका नेता नेपाल २०७० को निर्वाचनमा रौतहट–१ र काठमाडौँ–२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । दुई क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपालले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ–२ छाड्नुभएको थियो । उक्त स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा काँग्रेसका कुइँकेल विजयी हुनुभएको थियो । स्थानीय तहको अङ्क गणित र २०७० मा आठ हजारभन्दा बढीको मतान्तर नेपालको पक्षमा भए पनि निर्वाचित क्षेत्र छोड्नुले नेपालमाथि मतदाताले प्रश्न उठाएका छन् । काठमाडौँ–२ मा प्रतिनिधिसभाका लागि २४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल वि.सं. २०६४ र २०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा इलाम–१ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । योपटक पनि खनाल त्यही क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । खनालका मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका भूपेन्द्र कट्टेल हुनुुहुन्छ । लगातार दुईपटक सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित खनाल ह्याट्रिकको दौडमा हुनुहुन्छ भने कट्टेल पहिलो जितको दौडमा हुनुहुन्छ । यसअघिको मतपरिणाम र स्थानीय तहको नतिजा भने खनालको पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभामा त्यस क्षेत्रबाट आठ जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा–७ बाट तत्कालीन एमाओवादीका युवानेता विश्वदीप लिङ्देनसँग पराजय बेहोर्नुभएको थियो । २०७० को निर्वाचनमा भने ओली विजयी हुनुभयो ।
तुलनात्मक रूपमा ओली सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । ओलीका मुख्य प्रतिस्पर्धीमा काँग्रेसका डा. खगेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ । शिक्षण पेसामा संलग्न अधिकारी उम्मेदवार बन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जागिर छाडेर झापा पुग्नुभएको हो । झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभामा ओलीसहित १४ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ ।
जन्मथलो चितवनमा पहिलोपटक उम्मेदवार बन्नुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसामु कडा चुनौती छ । काँग्रेसको बलियो क्षेत्र मानिएको चितवन–३ मा काँग्रेसकै समर्थनमा उम्मेदवार बन्नुभएका राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का विक्रम पाण्डे प्रचण्डका लागि चुनौती हुनुहुन्छ ।
सशस्त्र सङ्घर्षपछिको पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रचण्ड रोल्पा–१ र काठमाडौँ–१० बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । दोस्रो संविधानसभामा रोल्पा छोड्नुभएका प्रचण्डलाई काठमाडौँका मतदाताले अस्वीकार गरे पनि सिरहा–५ का मतदाताले जनप्रतिनिधि चुने । योपटक प्रचण्ड पुरानो निर्वाचित क्षेत्र सिरहा पनि छोडेर जन्मथलो चितवन पुग्नुभएको छ । एमालेको सहयोगमा उम्मेदवार बन्नुभएका प्रचण्डलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनौती कमजोर नहुँदा ‘डेन्जर जोन’का रूपमा हेरिएको छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएपछि पहिलोपटक गोरखा–२ का मतदाताले डा. बाबुराम भट्टराईलाई दुई तिहाइ मत दिएका थिए । गोर्खाली जनताको मतमा भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँले दुई क्षेत्र रोज्नुभयो । रूपन्देही–४ का मतदाताले पराजित गर्दा उहाँ गोरखाबाट पुनः बहुमत मतका साथ विजयी हुनुभयो ।
संविधान जारीपछि भट्टराईले राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्दैै संसद्बाट पनि बाहिर आएपछि नयाँ दल गठन गर्नुभयो । अहिले उहाँ नयाँ शक्ति पार्टीका नामबाट पुनः गोर्खाली जनताको घरदैलोमा हुनुहुन्छ । भट्टराईको प्रतिस्पर्धीमा उहाँकै मूल पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
भट्टराईका लागि श्रेष्ठ कडा चुनौती हुनुहुन्छ । एमालेको सहयोगमा उम्मेदवार बन्नुभएका श्रेष्ठ पछिल्लो अङ्क गणितमा केही अघि हुनुहुन्छ । भट्टराईलाई काँग्रेसको बलियो साथ छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३७ क्षेत्रमध्ये अत्यन्तै रोचक निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा गोरखा–२ लाई हेरिएको छ ।